Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Semi Auto T Shirt Bag စက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Semi Auto T Shirt Bag စက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Semi Auto T Shirt Bag စက်
ပုံစံ - ST-V2S-2 & ST-VS-2 Series
မြန်နှုန်းမြင့်တစ်ပိုင်း-auto2Track Hot-T ကိုဖြတ်-လေဖိအားထိန်းစနစ်ဖြင့် အင်္ကျီအိတ်ပြုလုပ်သည့်စက်
မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှု.စွမ်းရည်:440 PCs/မိ. (၂ လိုင်း)
2 အမှတ်အသားအာရုံခံကိရိယာပါသော servo စနစ်2ခု,2 လိုင်းပုံနှိပ် T ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။-အင်္ကျီအိတ်.
အလှည့်-တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဘား ဒီဇိုင်းကို မြှင့်တင်ပါ။,သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။.
ပူတယ်။-အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ4ခုဖြင့် အလုံပိတ်ဖြတ်ပါ။;တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။.
အင်ဗာတာနှင့် လေဖိအားထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အလိုအလျောက်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုကို ကျွေးမွေးပါ။.
ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်ခြင်း မရှိပါ။.
အကြို-connect device ၏ပြောင်းလဲမှုကိုအတိုကောက်.
လိုင်း&ကြိမ်;ဒဗလျူ(အများဆုံး) အိတ်အရှည် ရုပ်ရှင်အထူ စွမ်းရည်
ST-800V2S-2 ၂ x ၃၆၀ 300~700 0.010~0.035 မက်တယ်။.၅၀၀(၂ လိုင်း)
ST-1000V2S-2 ၂ x ၄၆၀ 300~700 0.010~0.035 မက်တယ်။.၅၀၀(၂ လိုင်း)
ST-1200V2S-2 ၂ x ၅၆၀ 300~700 0.010~0.035 မက်တယ်။.၅၀၀(၂ လိုင်း)
ST-800VS-2 ၂ x ၃၆၀ 300~700 0.010~0.035 မက်တယ်။.၄၀၀(၂ လိုင်း)
ST-1000VS-2 ၂ x ၄၆၀ 300~700 0.010~0.035 မက်တယ်။.၄၀၀(၂ လိုင်း)
ST-1200VS-2 ၂ x ၅၆၀ 300~700 0.010~0.035 မက်တယ်။.၄၀၀(၂ လိုင်း)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/semi-auto-t-shirt-bag-machine.html
၏ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ် Semi Auto T Shirt Bag စက်စက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကဏ္ဍအားလုံးကိုဆက်လက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ထူးချွန်မှတဆင့်ဖောက်သည်များ, ဝန်ထမ်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှရေရှည်တန်ဖိုးကိုပို့ခြင်းအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တည်ဆောက်ရန်နှင့်ဦးဆောင်-edge စျေးကွက်ဆောင်ခြင်းငှါ, ဆန်းသစ်တီထွင်ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Auto T Shirt Bag စက်
Semi Auto T Shirt Bag စက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ Semi Auto T Shirt Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ
Fully Auto T Shirt Bag စက်
Semi Auto T Shirt Bag Machine ဖြင့် Conveyor
Multi line Cold Cut T Shirt Bag စက်
Cold Cut And Slit Seal T Shirt Bag စက်